Kitra any Eoropa : lasa mpanazatran’ny Real de Madrid i Zidane | NewsMada
Kitra any Eoropa : lasa mpanazatran’ny Real de Madrid i Zidane
Rehefa tsy niakatra kianja intsony i Zinedine Zidane, nanapa-kevitra ny lehilahy fa hanao mpanazatra. Notendren’ny filohan’ny klioba Real de Madrid, hanazatra ity ekipa “Madrilène” ity ny tenany.
Nanomboka, ny alatsinainy lasa teo, ilay kintan’ny baolina kitra frantsay, Zinedine Zidane (Zizou) indray no hanazatra ny Real de Madrid. Nambaran’i Florentino Perez filohan’ny ekipa Réal de Madrid, tamin’ny fomba ofisialy, tamin’ny mpanao gazety izany vaovao izany. Handimby an’i Rafael Benitez, izy, amin’ny fitantanana ity ekipan’i Espaina ity. “Anisan’ny mpilalao manana ny tantarany sy ny zava-bitany, tamin’ny baolina kitra i Zidane. Izy rahateo, mahafantatra tsara ity klioba ity, ary nahavita fanamby tamin’izany. Io ny kianjanao, io koa ny ekipanao. Matoky anao izahay, ary mino fa hisy fientanam-po, amin’ny lalao rehetra”, hoy Perez, taminy.
Marihina fa nandimby an’i Carlo Ancelotti, i Benitez, saingy tsy nahafa-po, ny mpijery sy mpanohana ny Real ny vokatra azony ka dia izao nesorina izao, rehefa nitondra ity ekipa ity, tao anatin’ny efa-bolana monja. Ankoatra izay, nanana olana tamin’i Cristiano Ronaldo koa izy, tao anatin’ny klioba.
“Misaotra ny filohan’ny klioba aho, amin’ny nanendreny ahy hitondra ity ekipa mendrika indrindra eran-tany ity», hoy i Zidane, tao anatin’ny fihetseham-po tanteraka. «Hanao izay fara heriko aho, mba hahazoan’ny Real amboara betsaka, amin’ny fiafaran’ny taom-pilalaovana», hoy izy.
Tsiahivina fa efa mpilalao tao amin’ny Real de Madrid i Zidane, nanomboka ny taona 2001 ka hatramin’ny 2006. Taorian’izay, mpanolotsaina teknika tao amin’ny Real ny tenany.
Marihina fa efa nahazo ny “Mondial 98” i Zidane ary nandrombaka ny tompondakan’i Eoropa ihany koa.
Na izany aza, nanamaloka ny androm-piainan’i Zidane, teo amin’ny filalaovana baolina kitra, ilay karatra mena azony, nandritra ny lalao famaranana, niadiana ny “Mondial 2002”, nikatrohany tamin’i Italia, ka naharesy an’i Frantsa, teo amin’ny fandakana ny “tirs au but”. Anisan’ny nampisongadina azy kosa ny nahazoany ny “Ballon d’or” intelo misesy.